သင်ကိုယ်တိုင် စုံထောက်လုပ်ကြည့်ရအောင် (ဥာဏ်စွမ်းဖြင့်အမှုဖေါ်)(၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » How To.. » သင်ကိုယ်တိုင် စုံထောက်လုပ်ကြည့်ရအောင် (ဥာဏ်စွမ်းဖြင့်အမှုဖေါ်)(၂)
သင်ကိုယ်တိုင် စုံထောက်လုပ်ကြည့်ရအောင် (ဥာဏ်စွမ်းဖြင့်အမှုဖေါ်)(၂)
Posted by အာဂ on Nov 13, 2010 in How To.., Know-How, DIY, Think Tank | 18 comments
သင်ကိုယ်တိုင် စုံထောက်လုပ်ကြည့်ရအောင် (ဥာဏ်စွမ်းဖြင့်အမှုဖေါ်)(၁)
အဖိုးတန် တံဆိပ်ခေါင်းကို ဘယ်မှာဝှက်ထားသလဲ။
တံဆိပ်ခေါင်းပြခန်းထဲ ပြထားတဲ့ ဒေါ်လာ သန်း ၃၀ တန် ကမ္ဘာ့ ရှားပါတံဆိပ်ခေါင်းတစ်လုံး အခိုးခံ ရတယ်။
တရားခံဟာတံဆိပ်ခေါင်းကို ခိုးပြီးတာနဲ့ အနီးရှိ တိုက်ကြီးတစ်လုံးထဲက အခန်းတစ်ခန်းထဲ ၀င်ပြေးတယ်။ရဲများကလည်း ချက်ချင်းလိုက်လာတယ်။
“ခိုးလာတဲ့တံဆိပ်ခေါင်း ထုတ်ပေး” ရဲကလက်ထဲကပစ္စတိုကိုယမ်းပြီး အမိန့်ပေးတယ်။
“ဟင်း၊ ခင်ဗျားတို့ရှာချင်သလိုရှာလေ” တရားခံက အရှက်မရှိဖြေတယ်။
ဒါနဲ့ရဲက တရားခံကိုလက်ထိပ်ခတ်လိုက်တယ်။ တရားခံ ကိုယ်ပေါ်ရှာတယ်။ တံဆိပ်ခေါင်း ကိုမတွေ့ဘူး။ အင်္ကျီတို့၊ခြေအိတ်တို့၊ဖိနပ်တို့ကိုချွတ်ပြီး သေချာရှာတယ်။ ဒါလဲမတွေ့ဘူး။
အဲဒီ့အခန်းထဲမှာက စတီး ရုံးစားပွဲတစ်လုံးနဲ့ မြေစိုက်ပန်ကာတစ်လုံးသာရှိတယ်။ ဒါတွေ မှအပ အိမ်ခန်းအလွတ်အတိုင်းပဲ။ ပန်ကာလည်နေတယ။ရုံးစားပွဲတော့ မပြောနဲကတော့။ ကြမ်း ခင်း၊ မျက်နှာကျက်တွေအားလုံး ကို အသေအချာရှာပြီးပြီ။ ဘာမှမတွေ့ဘူး။
ရဲကဘယ်လိုမေးမေး၊ တရားခံက သရော်ရယ်ရယ်နေတယ်။ မဖြေဘူး။
တံဆိပ်ခေါင်းဟာ အလွန်တန်ဖိုးကြီးတဲ့အတွက် ပြတင်းပေါက်ကနေအပြင်ကိုလွင့်ပစ် တာလည်း မဖြစ်နိုင်ဘူး။ အနီးအနား တစ်နေရာရာမှာ ၀ှက်ထားတာဖြစ်လိမ့်မယ်။ သေချာ အောင် ရဲက လည်နေတဲ့ ပန်ကာကို ရွှေ့ကြည့်တယ်။ ပန်ကာအောက်ကို စစ်ဆေးကြည့်တယ်။ ဒါလဲတံဆိပ်ခေါင်းကို မတွေ့ဘူး။
ရဲက စိတ်ပျက်လက်မှိုင်ချတော့မယ်အချိန်မှာ ပုဂ္ဂလိက စုံထောက် မစ္စတာ အာဂ ရောက်လာတယ်။ သူဟာ အခိုးခံရတဲ့ တံဆိပ်ခေါင်းပိုင်ရှင်က ဖိတ်ခေါ်လို့လာရောက်စုံစမ်းတာ။ သူကအခန်းကိုတစ်ချက်ဝှေ့ကြည့်လိုက်ပြီး………..
“ရဲ မျက်စိကို ဘယ်မှာအသုံးချရမလဲ။ တံဆိပ်ခေါင်းက မျက်စိရှေ့မှာပဲဟာ” လို့ပြောပြီး တံဆိပ်ခေါင်းရှိရာကို ညွန်ပြလိုက်တယ်။
ဒါဖြင့် တံဆိပ်ခေါင်းကိုဘယ်မှာ ၀ှက်ထားသလဲ??????????
အဖြေကတော့ ထုံစံအတိုင်း ကွန်မန့်မှာပဲပေါ့
ပန်ကာအရွက်ပေါ်မှာ ဒါမှမဟုတ် ဆံပင်ကြားထဲမှာ ကပ်ထားခဲ့မှာပေါ့။ ရဲကချက်ချင်းလိုက်လာတယ်ဆိုတာမရှင်းဘူး။ သူခိုးက တံဆိပ်ခေါင်းကပ်ချိန်ရမရရယ် ပိုအရေးကြီးတာက အဲဒီလောက် သက်တမ်းကြာနေတဲ့ တံဆိပ်ခေါင်းရဲ့ ကော်ကကောင်းနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီကော်ဖိုးနောက်ထပ် သန်းသုံးဆယ်ထပ်ပေါင်းသင့်တယ်။
ရဲရဲ့ မျက်စိရှေ့မှာပဲ ရှိတယ် ပြောတော့ ပန်ကာရဲ့ တစ်နေရာရာမှာ ရှိမှာ ..
ပန်ကာအောက်ကို ကြည့်ပြီးပြီ ဆိုတော့ ပန်ကာ အထက်ပိုင်းမှာ ရှိမယ် ..
မြေစိုက် ပန်ကာ ဆိုတာ အထောင်ပန်ကာကို ဆိုလိုတာလို့ မှတ်ယူမိတယ် ..
ပန်ကာရဲ့ ရှေ့ ကာဗာ ဘယ်လို ရှိတယ် ဆိုတာ မသိနိုင်တော့ .. ခန့်မှန်းကြည့်ရင်
ပန်ကာ ရှေ့ကာဗာ အလယ်က အ၀ိုင်းရဲ့ အတွင်းဖက်ကို ထည့်လိုက်မယ် ဆိုရင်
ပန်ကာကလဲ လည်နေတာဆိုတာ ဆိုတော့ ပန်ကာလေကြောင့် အတွင်းထည့်ထားတဲ့ တံဆိပ်ခေါင်းလဲ
မကျနိုင်ဘူးလို့ ထင်မိပါတယ် ..
နောက်တစ်ချက် ဖြစ်နိုင်တာက ကြမ်းပြင်နဲ့ မျက်နှာကျက်လို့ ပြောထားတော့ နံရံမှာ ရှိနိုင်မှာလား ဆိုတာ (ဖြစ်နိုင်ချေ နည်းတယ်)
တံဆိတ်ခေါင်း က ရဲ မျက်စိရှေ့မှာ ဖုံးနေလို့
စားပွဲပေါ်က စာအိတ်တစ်လုံးပေါ်မှာကပ်ထားမှာပေါ့ ။
အဟမ်း..အဟမ်း… (ဝင်ရောလိုက်ဦးမယ်) အတွေ့ အကြုံအရခန့် မှန်းရမယ်ဆိုရင်.. မြေစိုက်ပန်ကာဝင်ရိုး(သို့ မဟုတ်) ပန်ကာအိမ်မှာ ပန်ကာရဲ့ တံဆိပ်လိုပုံဖမ်းပြီးကပ်ထားနိုင်တယ်.. ဖြစ်နိုင်ခြေ ၇၀%
နောက်ထပ်အတွေးတစ်ခု က.. တရားခံဟာ(Sorry မှားလို့ ) ဥာဏ်စမ်းရှင်ဟာ ဖြေသူ အတွေးတစ်မျိုးဖြစ်သွားအောင်လမ်းကြောင်းပြောင်းပြီး ပန်ကာတို့ ၊ စားပွဲတို့ ကိုဖြည့်စွက်လာတယ်။ တကယ် တရားခံရဲ့ စကား(ခင်ဗျားတို့ မျက်စိရှေ့ မှာ) အရ တရားခံရဲ့ခါးပတ်ခေါင်း တံဆိပ်အဖြစ်နဲ့၈၀%၊ အကျီ်တံဆိပ်အဖြစ်နဲ့ ၅၀%၊ ဘောင်းဘီ တံဆိပ်အဖြစ်နဲ့ ၆၀% လို့ ခန့် မှန်းပါတယ်။
ဟို အမှတ် တစ် တုန်းက moethidasoe ဖြေတာက မှန်နေတော့ ကျွန်ုပ်မှလည်း ရောချသည် မထင်စေလို၍
သို့ သော် အဖြေမှန် ကြေငြာချိန်တွင် ကျွန်ုပ်၏ အမည်မပါလာ၍ လွန်စွာမှ လည်း စိတ်ပျက်ခြင်းနှင့်အတူ
ယ္ခု အဖြေကို သိသော်လည်း ကျွန်ုပ်မဖြေတော့ပါ
IP ( I ကျွန်ုပ်၏ P အီးပေါက်သည် ) မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု
ဘကြီးပုလက်မက ရှည်နေတော့ မေးသူက လက်ခလယ်လို့ထင်ပြီး တမင်သက်သက်ချန်ထားခဲ့ပုံ ရပါတယ်။
ကိုမိုက်xxပုရယ် .. အခု အဖြေမှ မထွက်သေးဘဲ .. ကျွန်တော်သည် ထိုနည်းလည်းကောင်း ထိုနည်းလည်းကောင်း ဆိုတဲ့ ရွှေမန်းတင်မောင် သီချင်းလို မလုပ်နဲ့လေ .. ရေးသာရေးချ .. စောတာ နောက်ကျတာဟာ လိုင်း မိတယ် မမိဖူး ဆိုတဲ့ အချက်မှာလဲ မူတည်နေသေးတယ် ..
မေးတဲ့လူကလဲ like or dislike ကို ပါ ကြည့်ပေးပါ .. ကို မိုက်xxပု စိတ်ကောက်သွားရင် ပွဲမစည်ဖြစ်သွားဦးမယ် ..
တံဆိပ်ခေါင်းက မျက်စိရှေ့မှာပဲဆိုတော့ ..
ပန်ကာမှာ ရှိဖို့က အဖြစ်နိုင်ဆုံးပဲ. ပန်ကာကလည်နေတယ်ဆိုတော့ လည်နေတဲ့ ပန်ကာထဲမှာတံဆိပ်ခေါင်းကို ထည့်ထားရင် ပန်ကာလည်နေလို့ တံဆပ်ခေါင်းရှိမှန်းမသိနိုင်ဘူးထင်တယ်
အဟမ်း အဟမ်း (မနေ့ အမေစုဆီသွားနေလို့ အသံဝင်နေပါသဖြင့်)ဖြေကိုပြောပါပြီ ……………….။ မည်သူတွေကအဖြေမှန် သနည်းဆိုတာ မရေးပြတော့ပါ.။ I P အောင်ပုတို့လို ဆရာသမားတွေ စိတ်ကောက် ကုန်မှာဆိုးလို့လည်းပါပါတယ်။
အဖြေ။ ။ တံဆိပ်ခေါင်းဟာ ပန်ကာရွက်ပေါ်မှာ ကပ်ထားပါတယ်။ ပန်ကာက အရှိန်လျင်မြင်စွာ လည်ပတ်နေတော့ မျက်စိက ၎င်းအပေါ်မှာ ကပ်ထားတဲ့ တံ ဆိပ်ခေါင်းကို မမြင်ရပါဘူး။
ပုလိပ်(ယနေ့အခေါ် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ တပ်သား) က ပန်ကာကို မပိတ်ဘဲ စစ်ဆေးတာ ဟာ လစ်ဟင်းမှုတစ်ခုပါပဲ..။
ကျေးဇူးပဲ အာဂ ရေ … အပြင်မှာ ကပ်တယ် ဆိုတော့ ကိုငြိမ်းချမ်း တစ်ယောက်ပဲ မှန်တယ် .. ဒါတောင် သူက ၇၀% ပဲ ပြောတာနော် .. like ဆိုတာ တစ်ယောက်ပါတယ် ..
ဒါထက် ကိုငြိမ်းချမ်းက ဇာတ်ထဲက နာမည်ကျော် ဟုတ်မဟုတ် သိချင်လို့ ..
စုံထောက်ကျော် မိုးသီတာစိုး ပြောတာ အဲ စဉ်းစားပုံတွေကလည်း အရမ်းကောင်းပါတယ်။ နောက်လည်း ဖြေပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။
ဒီ ဥာဏ်စမ်းအမူ တွေပြီးသွားရင် ကျွန်တော် အလွတ်စုံထောက်အဖွဲတစ်ဖွဲ့ ဖွဲ့ဖို့ စဉ်းစား ထားပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ဆားပုလင်းနှင်းကြောင် ၊ စုံထောက်ကျော် မိုးသီတာစိုး ၊အိုင်ပီ အောင်ပု တို့ ပါပါလိမ့်မယ်။ ကျန်ရှိသည့်လူများလည်း စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါတယ်။
ကိုငြိမ်းချမ်းက တော့ လူရွှင်တော် ဟုတ်မဟုတ်ကို အထူးစုံစမ်းရေး အဖွဲတွေ လွတ်ပြီး စုံစမ်းနေပါကြောင်း သတင်းပေးအပ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကိုငြိမ်းချမ်းကို အမှတ်ပေးထားတာ
အိုင်ပီ အောင်ပုရေ ….ခင်ဗျားကို မဲကိစ္စတွေ စုံစမ်းခိုင်းထားတာကြာပြီနော်။
အခုတစ်လော စုံစမ်းခိုင်းတဲ့ ကိစ္စတွေထဲမှာ ဒီကိစ္စ အေ၇းကြီးနေတယ်နော်။
ကျွန်တော့် သတင်းပေးပြော တဲံအတိုင်းဆိုရင်ခင်ဗျား ရန်ကုန်က မာဆက်တွေ ပိတ် တဲ့ ကိစ္စ ၊ ဘီယာဆိုင်က အဆိုတော်လေး….B….ကြီးတဲ့ ကိစ္စ ။ KTV က ကောင်မလေးတွေ ငွေတောင်း ကြမ်းကုန်တဲ့ ကိစ္စတွေပဲ စုံစမ်းနေလို့ အလုပ်များနေတယ်ကြားတယ် အဲဒါဟုတ်လား…အိုင်ပီ…။
အဟမ်း.. အဟမ်း… အမေး ရှိ အဖြေရှိရတေ့ာမှာပေါ့.. အရင်ရက်တွေက နေသိပ်မကောင်းလို့မဖြေဖြစ်ခဲ့တာ.. ကိုငြိမ်းချမ်းဆို တဲ့ နာမည် က မိုးကြိုးငှက်ငယ်လေးများ အဖွဲ့ မှာတုန်းက ရခဲ့တဲ့ နာမည်ပါ.. သဘောပေါက်နော် ဟင်း ဟင်း